गरिब र दलितले मात्र बोक्सी बन्नुपर्ने ?
चाहे कल्लीकुमारी विक हुन् वा लक्ष्मी परियार– किन दलितलाई मात्र लाग्छ बोक्सीको लाञ्छना ? कुनै धनाढ्य महिलामाथि यस्तो आरोप लागेको कहिल्यै कसैले सुनेको छ ? हामी दलित हेपिएका छाँ, उपल्लो भनिएका जातबाट । म श्याम नेपाली । काठमाडांै बालकोटमा सिलाइ–बुनाइको काम गर्छु । घर, काभ्रेको सानोवाङथली । जहाँ १५ दिनअघि मलमूत्र कोच्याएर पिटिपिटी मारियो, हाम्री भाउजूलाई । हामी पाँच दाजुभाइमध्येको साहिँलो । जेठो दाजु मिलन… विस्तृत समाचार
कता जाऊँ मनको पीडा पोख्न
श्रीमान््का लागि जब घरकी मुर्गी दाल बराबर हुन्छ र बाहिरफेर चोरी खान पल्कन्छन् तब ‘घर’ रहँदैन । यस्तै उजाडताले घेरिएको जिन्दगी छ । ०५१ सालमा मागीविवाह भएको हो । श्रीमान् सेनामा कार्यरत । भर्खरै सुरु भएको थियो, माओवादी जनयुद्ध । नेपाली सेनामा कार्यरत व्यक्तिसँग विवाह गर्दा त्यो १० वर्षको रात कहिल्यै चैनले सुत्न पाइएन । कहिले कतै सेनालाई माथ्र्याे विद्रोहीले, कतै प्रहरीलाई । हरपल, हरक्षण… विस्तृत समाचार
कुर्कुरे बैंसको कच्चा प्रेम
देखेर मात्र नहुने, लेखेरै ल्याउनुपर्ने रहेछ ! कसै–कसैको जीवनमा चोटै चोट र ठक्करै ठक्कर खान मात्र लेखेको हुँदो रहेछ । नौ महिना कोखमा राखेर जन्म दिई, १० धारा दूध पिलाउने आमा त आफ्नो हुन सकिनन् भने अरू को आफ्नो होला ? कसले, कसको दुःख हरण गर्न सक्ला ? यस्तै लाग्छ, उनको जिन्दगी पढ्दा । भोजपुरको एउटा गाउँमा जन्मेर त्यहीँबाट एसएलसीसम्म अध्ययन सकी उच्च शिक्षा अध्ययनका… विस्तृत समाचार
सिर्फ एउटा नाम खोजिरहेछु
यसैले भनिएको होला, अविवाहिता प्रेमको प्रभावले र विवाहिताहरू प्रेमको अभावमा बर्बाद हुन्छन् । आफ्नै जिन्दगीका पाना पल्टाउँछु, एकान्तमा सोच्छु विकासानन्दले मेरै लागि भनेका रहेछन् झैं लाग्छ । म पनि वर्वाद भएकी पात्र हुँ, प्रेमका कारण । अल्लारे बुद्धि, कतिबेला पग्लिएँ, कसरी पग्लिएँ हेक्का छैन । १६ वर्षको किशोरीवय । बालाजुस्थित तरुण माविमा पढ्दै थिएँ । त्यहीँ भेट भएका हुन्, विजय पौडेल । सायद लेखान्त नै… विस्तृत समाचार
पीरैपीरले रोजेको सुखको पथ
सधैं सरल रेखामा कहाँ बग्दो रहेछ र जिन्दगी ? उबडखाबड र भीरैभीरको जिन्दगी आँखा चिम्ले पनि पीर आँखा खोले पनि पीर । म मीना चन्द, सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँबाट विवाहबारी गरी काठमाडौं खाल्डोमा छिर्दा जिन्दगीमा जति उमंग, उत्साह थियो त्यो सबै खुसीलाई राजधानी खाल्डोले निल्यो । मेरो खुसी अर्थात् मेरो श्रीमान् । जसका लागि मैले आफ्नो जन्मघर त्यागेँ, बुबाआमाको साथ त्यागेँ । म एउटी ड्राइभरकी श्रीमती… विस्तृत समाचार
किन किन, यो मन अमिलो
‘नगृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते । गृहं हि गृहिणी हीनं अरण्यं सदृशमतम् ।। अर्थात् घरलाई घर भनिँदैन, जहाँ गृहिणी हुँदिनन्, घर भएर पनि गृहिणी नहुने हो भने त्यो वनसमान हुन्छ भनेर नीतिशतकमा त्यसै भनिएको होइन । तर, जिन्दगीको पाटो भने अलि फरक रहेछ । लाग्छ, जिन्दगी भनेको घातै घातको कथा हो । आँखा चिम्ले पनि खुसी नमिल्ने र आँखा खोले पनि । जब आफ्नै भनिएकाहरूबाट घातरूपी… विस्तृत समाचार
नमस्कारलाई किन कमजोरी छान्यौ गुरु ?
सामाजिक सञ्जालको जञ्जालमा परी कति आवाद भएका छन्, कति बर्बाद । सामाजिक सञ्जालकै कारण हालै मात्र गोरखाकी कुसुम श्रेष्ठ रातारात सेलिब्रेटी बनिन् । तर, त्यही सामाजिक सञ्जालका कारण पीडित बनेकी प्रौढ महिला हुँ म । प्रनिशा (नाम परिर्वतन) । पेशाले गृहिणी । आफ्नै गुरुबाट बर्बादीको मुखमा पुगेर भाग्न सफल भएकी । यस्ता नरपशुहरुबाट म र अरु युवतीले अस्मिता नगुमाउन् भन्ने उद्देश्यले लेख्दैछु सत्य घटना । … विस्तृत समाचार
बिहेलाई पेसा नबनाऊँ न बिन्ती !
कालोकोटको आडमा जसले जे गरे पनि हुने मुलुक रहेछ यो । रौतहट जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार (उपसचिव) रही हाल पुनरावेदन अदालत बाग्लुङका उपरजिष्ट्रार कुलप्रसाद भण्डारीबाट व्यहोरेको मानसिक र शारीरिक पीडाको अत्यासलाग्दो पहाड बोकेर हिँडिरहेको छु । न्यायको खोजीमा कहाँ–कहाँ मात्र भौंतारिनँ । सबैतिर चहार्दै अन्ततः न्यायको झिनो आसमा सर्वाेच्च अदालतसम्म आइपुगें । थाहा छैन, कालोकोटबाटै लुटिँदा, खुसी खोसिँदा यो मुलुकमा न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन ? भरतकुमार… विस्तृत समाचार
हामीले नमान्दा के फरक प¥यो र !
मीना पाण्डे, कांग्रेस नेतृ हालै सम्पन्न कांग्रेससम्बद्ध नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा पराजित मीना पाण्डे कांग्रेसभित्र सादगी नेतृका रुपमा परिचित छन् । कुनै तामझाम नरुचाउने उनी निष्ठावान नेतृ हुन् । शायद, त्यसैले होला– हरेक अवसरबाट बञ्चित रहँदै आएकी छन् । देउवा र सिटौलाबीच गठबन्धन हुँदा महिला संघमा रामचन्द्र पक्ष झण्डैझण्डै ‘साफ’ हुने स्थितिमा पुग्यो । तर, मीना यसबाट बिचलित छैनन् । ० महिला संघ महाधिवेशनको अनुभव… विस्तृत समाचार